के महायोगी सिद्धबाबा कृष्णदाश गिरी बलात्कारी हुन ? – Pundary Aryal :: Nepali Literature Portal
भगवान रजनीश: जसको नाम हो चन्द्र मोहन जैन उनि डिसेम्बर ११, १९३१ मा कुचवाडा भोपालमा जन्मेका हुन । आचार्य रजनीश , भगवान श्री रजनीश हुदै ओशो हुन् पुगेका थिए । ओशो भनेको जापानिज भाषामा देवत्व प्राप्त सन्त अर्थात भगवान स्वरुपको व्यक्ति र संस्कृतमा आचार्य शिक्षक भन्ने अर्थ लाग्दछ । उनलाई पुरातन धर्म बिद्रोहीको रुपमा लिएका थिए । रजनिशले संसारका सबै बिषयवस्तुलाई अन्त्यन्त तार्किक बस्तुनिष्ठ सत्यता आभास हुने गरि प्रबचन गर्दथे । बिशेष गरेर भगवान बुध्द, महाबिर र भगवान श्री कृष्णको बारेमा गहन प्रबचन गरेको वहाँहरुको अनुयायीको रुपमा यिनलाई मान्दछन । संसार भरि उनि लोकप्रिय बन्न सके । उनको प्रबचनका हजारौ पुस्तक छापिए । उनको पुस्तक मध्ये “सम्भोग से समाधि की ओर “ भन्ने पुस्तकले अन्त्यांत ठुलो बजार पायो । यो पुस्तकले रजनीशलाइ चर्चाको शिखरमा पुर्याएको थियो । धेरै धर्म गुरुले बिरोध गरेका थिए । योग साधनालाइ अपवित्र बनाउने खेल गर्यो भनेर लखटने काम भयो । त्यो पुस्तकको सार थियो संसारका कुनै पनी प्राणी सेक्स र खाना बिना बाच्न सक्दैनन । संसारका मान्छेहरुलाइ खाना र सेक्स चाहिन्छ । यो प्राकृतिक कुरा हो र यो कसैले रोक्ने सक्दैन भन्ने बलियो तर्क थियो रजनीशको । जबसम्म मान्छे सेक्सबाट निबृत हुन्न वा बितृष्णा जाग्दैन तबसम्म उ ब्रह्मचर्यामा बस्न सक्दैन । उ सन्यासी हुने सक्दैन भन्ने कुरालाइ प्रमाणित गरेका थिए । जसजसले उनका पुस्तकहरु पढेका थिए ति सबै बिध्दतबर्ग रजनिशका अनुयायी बन्न पुगे या त उनको नियमित पाठक बने । रजनीशले सेक्सको बारेमा खुल्लम खुला प्रबचन दिने सन्यासी हुन् । रजनीशले भनेका छन् जुन सुकै स्त्री पुरुष दुवै सहमती इच्छा नभइकन गरिएको सम्भोग त्यो बलात्कार हो । दुबैको सहमति र इच्छा भयो भने कुनै बन्धनले रोक्न सक्दैन यो कुरा जति साचो छ त्यति नै सत्य पनि छ । त्यसैले ओशो तपोबनमा बलात्कार भएको कुनै केश मैले सुनेको छैन । जो अहिले सम्मका कुनै धर्म गुरुले गर्न सकेका छैनन । धेरै धर्मगुरुले सेक्सको बारेमा नबोल्ने तर आफ्ना भक्त र अनुयायीहरुलाई बलात्कारको शिकार गराउने कर्म गरेका छन् । रजनिशलाई कहिले पनि बलात्कारी र हत्यारा भन्ने आरोप लागेको सुनिदैन । रजनीशको मृत्यु १९जुन, १९९० मा भएको हो । उनलाई संसारमा एकआध्यामिक अलौकिक गुरुको रुपमा लिइन्छ, उनी आधुनिक संयासका प्रवर्तक हुन।
नेपालका अति सम्मनित खप्तड बाबा र योगी नरहरी नाथ बाबा कहिलेपनी यस्ता आरोपको सामना गर्न परेन ।
वहाहरुको जीवन पर्यन्त यस्ता हर्कत बाट टाढा भएको पाइन्छ ।
मेरो बुद्धिले जति रजनिशलाई बुझे त्यो अल्पज्ञान हुन् सक्छ ? तर मैले वहांको कुरालाइ यहा उल्लेख गर्न खोजेको कुरा के हो भने जतीसुकै बालब्रह्मचारी किन नहोस उ काम बासना सेक्सबाट टाढा हुने सक्दैन । त्यो प्राकृत कुरा हो । यो सत्यलाई छोपेर आफुले ब्रहाचारी भएको ढोंग गर्दा बाबाहरु बलात्कारी बन्दछ । यी बाबाहरु खुराक नै खतरा पौष्टिक युक्त हुन्छ । जसले उनीहरुले आइमाई त एक्लै भेटनै हुन्न । यो उनीहरुले कन्ट्रोल गर्न सक्दैनन् र यस्ता घटना घटछन् । भगवत प्राप्त गर्न एउटा गृहस्त जीवन जिउने व्यक्तिले पनी गर्न सक्छ, मात्रै उसको निस्काम भक्तिको आब्स्याकता हुन्छ ।यो कुरा भगवान श्रीकृष्णले भागवत गीतामा भन्नु भएको छ । भगवान बुध्द र भगवान श्री कृष्णका पनी पत्नीहरु थिए ।
जसले बालब्रह्माचारी बनेर मठाधीश बनेका हुन्छन ति कहिँ न कहिँ यौन काण्डमा आरोपित भएकै देखिन्छ । चाहे बौध्द गुम्बामा होस चाहे चर्चका पादरिहरुमा । धेरै बाबाहरुको राष्ट्रको सर्बोच्च पद राजा प्रधानमन्त्रि र मन्त्रीको पहुँचमा हुन्छन । ति पदाधिकारी समेत यी बाबाहरुका अनुयायी बनेका छन् । यस्ता बाबालाइ भेट दर्शन गर्न चुकेका हुदैनन । त्यसैले गर्दा यी बाबाका बलात्कारका मुद्दा सेलाउने गर्दछन । उच्च पदमा पुगेका नेताहरुको यस्ता थुपै कुकर्म बाहिरिन्छन र सेलाउने गर्दछन । पैसा पावरले गर्दा उच्च पदका बाबा र नेताहरु उम्कंछन र पिडितले न्याय पाउदैनन । धर्मको ठेकेदारका रुपमा समाजमा राम्रैसंग स्थापित भएका धर्म गुरुहरु एकाएक बलात्कारी र हत्याराको आरोप लागेर जेलमा पुगेको घटना नौलो चाहि होइन ।
अहिले भर्खरै महायोगी सिद्ध बाबा कृष्ण दाश गिरी माथी एक महिलाले बलात्कारको आरोप लगाइकि छिन ।
उनी मलाइ यी बाबाले बलात्कार गरे न्याय पाउ भनेर निबेदन दिईकिछिन र बाबाले गल्ती स्विकारेको
अडियो समेत न्युज २४ मा आइसकेको छ । सो अडियो अनुसार बाबाको अपराध ठहर्छ ठहर्दैन त्यो अदालतको अनुसन्धान कुरा हो । यी बाबाले त्यो अडियो फेक हो मैले बोलेको छैन म एलैसंम कुनै महिलासंग एक्लै एउटा कोठामा पनि बसेको छैन भनेर एउटा यु ट्युब टिभी च्यानेललाई अन्तर्वार्ता दिएका छन् भने प्रहरी उनलाई पक्राउ गर्न अस्पतालमा पुगेको भनिएको छ । हुन त अदालतले निर्णय नगरेसम्म कसैले उनलाई अपराधी हुन् भन्न मिल्दैन । चतरा घामका पिठाधिश महायोगी सिध्द बाबा नौ दिनसम्म बन्द बाकसमा माटो मुनी बसेर अलौकिक कर्म गरेर प्रख्याति कमाएका थिए । हुन त उनलाई बदनाम गर्नका लागि नै कोइ महिला खडा गरेर यो आरोप लगाइएको पनि हुन् सक्छ ? यो अनुसन्धानकै बिषय बनेको छ ।
राम बहादुर बम्जोन : यी राम बहादुर बम्जोन पछिल्लो समयमा लिटल बुध्द भनेर संसार भर प्रख्यात भएका थिए ।
यिनका बारेमा पनि एक अनुयायी महिलाले उजुरी हालेकी थिइन् उनीकै आफन्त अनुयायी १८ बर्षे युवतीलाई बलात्कार गरेको र उ बम्जनको आश्रम बाट हराइकि हुदा उनको हत्या गरेको भनेकी थिइन् । तर पनी प्रहरीले उनलाई प्रकाउ गरेर अनुसन्धान गरेको पाइएन । पछिल्लो समयमा हराएकी युवतीका परिवारको निबेदन अनुसार २०१९ मा उनको आश्रमबाट हराइकि अनुयायीको अनुसन्धानको फाइल खोलिएको छ ।
आशाराम बापू : उनको नाम अशुमल सिरुमलानी हरपलानी हो । उनि अप्रिल १७, १९४१ मा पाकिस्तानमा जन्मेका हुन् । इन्डियामा उनले चारसय भन्दा धेरै आश्रम संचालन गरेका थिए । उनका करोडौ भक्त थिए । उनी इन्डियाको माथिल्ला राजनेता र सर्बसाधारणका मसिहा मानिन्थे । उनको धार्मिक प्रबचन सुन्नको लागी करोडौ भक्तहरु लालायित हुन्थे । उनि अप्रिल २०१८ मा एक बालिकालाई बलात्कार गरेको अपराधमा जेल सजाय काटिरहेका छन् । उनका करोडौ भक्तहरु प्रतिबाद गरेपनि उनि कानुनको नजर अपराधी ठहरिए । कानुनले उनलाई अपराधी ठहर गर्यो र सजायको भागिदार भए ।
गुरमित रामरहीम सिंह: उनी डेरा सच सौदा नामक एक धार्मिक संस्थाका प्रमुख थिए । यी २०१५ मा इन्डियाको सयमध्ये ९६औ शक्तिशाली व्यक्ति थिए / यी बाबा औतारी थिए इन्डियन फिल्म हिरो, अभिनेता डाइरेक्टर, लेखक, गीतकार र गायक समेत थिए / उनले डेरा नामक संस्थाले तिनवटा हस्पिटलर १३ वटा शैशिक संस्था संचालन गरेका थिए / सिबिआइ कोर्टले अगस्त २५, २०१७ मा बलात्कार र हत्याको अभियोगमा आजिबन काराबासको सजाय काटिरहेका छन् ।
नित्यानन्द : यिनको जन्म १९७७ मा तमिलनाडूमा भएको हो । यी इन्डियन हिन्दु गुरु हुन् । नित्यानन्द ध्यान पिठमका संस्थापक हुन् । २०१० मा सन् टिभी ब्रोकास्टले रन्जितासंगको भिडियोले सनसनी मचाएको थियो ।
तर उनले आफुलाई बदनाम गर्नको लागि फेक भिडियो बनाइएको थियो ।
सत्य साइ बाबा: दुनियाले मानेका सत्य साइ बाबालाइ पनी सेक्सुयल एब्युज गरेको आरोप लागेको थियो । तात्कालिक माया भन्ने मासीक पत्रिका समेत उनका अपराधी हुन भनेर छापिएको थियो / wilkipedia मा यस्तो लेखेको छ । Claims of sexual abuse
In 2004, the BBC producedadocumentary titled The Secret Swami, as part of its series “The World Uncovered”. One central theme of the BBC documentary was again Alaya Rahm’s sexual abuse allegations against Sathya Sai Baba. This documentary interviewed him together with Mark Roche, who had spent 25 years of his life since 1969 in the movement and alleged abuse by Sai Baba. The show also featured allegations from Sai Baba critic Basava Premanand. Premanand stated in the documentary that, in his opinion, Sai Baba faked his materialisations. Here, he claimed that Sai Baba was “not justafraud, butadangerous sexual abuser”. According to his interview,
जती सुकै प्रोपोगान्डा भए पनी सत्य साइबाबालाइ इन्डियन सरकारले कार्बाहिको दायरामा ल्याएन । तत्पश्चात बाबाको सामाजिक कार्यको प्रचार हुन् थाल्यो । विदेशीहरु भक्त पनी बढेर गए । अन्तत : सत्य साइ बाबा जिबित भगवानको रुपमा स्थापित भए । सत्य साइ बाबाको जन्म नबम्बर २३, १९२६ भएको थियो भने मृत्यु अप्रिल २४, २०११ मा भएको थियो । आज पनी सत्य साइ बाबाका संसार भरि करोडौ भक्त र अनुयायीहरु छन ।
( मैले कुनै बाबाजीहरुका भक्तहरुको आस्थालाई चोट पुर्याउन खोजेर यो कुरा लेखेको होइन । माथी उल्लेखित जानकारी कुनै न कुनै मिडिया र गुगलबाट लीइएको हो । यो मेरो सहमति असहमतिसंग कसैसंग कुनै सरोकार राख्दैन । जो जसको पछि अनुयायी बन्न जानु हुन्छ मेरो कुनै आपत्ति छैन । मैले त्यसको बिरोध गरेको होइन तर साच्चै कै अपराध गरेका छन भने चाहे ठुला नेता चाहे नाम चलेका बाबा हरु किन नहुन तिनीहरुलाई सजाय दिनु धर्मको रक्षा हो । पापको भागिदार ति हुने पर्छ भन्ने मेरो आध्यामिक ठहर छ । )
घनश्याम भुसालले आफ्नो साख जोगाउन सक्लान ?